အသစ် LEGO Minions အစုံတွေ့ပြီ
12 / 06 / 2021 12 / 06 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 237 Views စာ0မှတ်ချက် 40511 Minions ကွန်ဖူသင်တန်း, 75550 Minions ကွန်ဖူတိုက်ပွဲ, အုတ်နှင့်အပိုင်းအစများ, Lego, Lego Minions, Lego Minions: Gru ၏ထ, Minions, Minions: Gru ၏ထ
အနည်းဆုံးနောက်ထပ်တစ်ခုရှိတယ် Lego Minions ကအထင်ကရဇာတ်ကောင်အတွက်သူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်များအတွက်လေ့ကျင့်နေကြသည်ပုံရသည်အဖြစ်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်လမ်းအပေါ်ထားကြ၏ 75550 Minions ကွန်ဖူတိုက်ပွဲ.
အုတ်နှင့်အပိုင်းအစများ, အ Lego ပျောက်ဆုံးနေသော p ကိုအစားထိုးခြင်းအတွက် Group ၏ ၀ န်ဆောင်မှုartသူတို့ရဲ့နောက်ကျောညွှန်ကြားချက်များကိုရယူပြီးနောက်တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည် Minions ဒီနှစ်တစ်ချိန်ချိန်လွှတ်ပေးရန်ကြောင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီလေးပါးကိုအောက်ပါအတိုင်း VIP Addon အစီအစဉ်များ ကြောင်းကိုလည်းမကြာသေးမီကဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
သို့သော်၊ နောက်ဆုံးဖော်ပြချက်နှင့်မတူသည်မှာဤအစုသည် ap နှင့်မတူပါartစာရင်းသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်များမပြည့်သေးပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့တွင်နာမည်နှင့်နံပါတ်သာရှိသည်။ Lego Minions 40511 Minions ကွန်ဖူသင်တန်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်တံဆိပ်တပ်ပြီးထိုနာမည်နှင့်ဆင်တူသည် 75550 Minions ကွန်ဖူတိုက်ပွဲ နှစ်ခုအကြားပိုပြီးတူညီရှိနိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ။
ဒီအသစ်အစုံတစ်ဖြစ်နိုင်သည် ပိုးအိစံ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော m စုဆောင်းမှုကိုပြီးမြောက်ရန်အော့တိုအပါအ ၀ င်ပိုကြီးသည့်အစုကိုထောက်ပံ့ရန်ရည်ရွယ်သည်artial arts minions။ သို့သော်လက်ရှိမော်ဒယ်နှင့် ပတ်သက်၍ လူသိနည်းသည်။
ဤလာမည့်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိရန်သင့်အားအသိပေးပါမည် Minions တာဝန်ရှိသူတစ် ဦး မှထုတ်ဖေါ်သောအခါသတ်မှတ်သည် 75550 Minions ကွန်ဖူတိုက်ပွဲ ယခုရရှိနိုင်ပါပြီသင်အစုံမှာပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဒီမှာ.
← Lego ၏ပထမဆုံးပုံရိပ်များ Friends 2021 Advent ပြက္ခဒိန် catalog ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
LEGO ကိုကူးပါ Marvel 76178 Daily Bugle ဒီဇိုင်နာဗီဒီယို →